Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Choputa mmasi nke ọdụ ụgbọ elu Frankfurt
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ebe nlegharị anya Fraport ọhụrụ ga -emepe na Ọgọst 2, Njem nlegharị anya nke ndị ọbịa na ọdụ ụgbọ elu na -arụ ọrụ ugbu a.
Ọbịbịa ọhụrụ nke ọtụtụ ndị ọbịa nke ga -emepe n'oge adịghị anya na Concourse C nke Terminal 1.
Njegharị ọdụ ụgbọ elu a ma ama ga -amalitekwa na mbido Ọgọstụ.
“Smart windo” na-eji eziokwu mebere iji gbakwụnyere ihe ngosi pronrama na data nọ n'ụgbọ elu kwụsịrị.
Airportgbọ elu Frankfurt na -enweta ihe na -adọrọ mmasị ọzọ: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi ọhụrụ nke ga -emepe n'oge adịghị anya na Concourse C nke Terminal 1. Ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ na -etinye ụwa na -adọrọ mmasị nke ọdụ ụgbọ elu kacha ukwuu na Germany na mkpịsị aka ndị ọbịa. Ọ bụ ohere nye ndị na -akwado ọdụ ụgbọ elu nke afọ niile ka ha jiri uche ha niile nyochaa azụmahịa ụgbọ elu. Kedu maka ịbanye n'ime ọrụ nke onye na -egbu mmadụ ma duru ụgbọ elu banye ebe ọ na -adọba ụgbọala? Ị nwere ike ime ya ebe a! Ma ọ bụ na -efegharị site na ọwa mmiri na -ebugharị nke sistemụ ebu akpaka nke ọdụ ụgbọ elu? Naanị tinye isi okwu eziokwu mebere wee malite ọmarịcha Motion Ride! Isi ihe ngosi ahụ, The Globe, na -enyekwa gị ohere iji ahụmịhe na -ahụ maka ụgbọ elu ụwa niile na -arụ ọrụ - ma mụta maka ọrụ dị mkpa ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na -arụ na ya.
E gosipụtara ụzọ site na ihe ngosi ahụ nke ruru mita 1,200 na -enwu site na ọnya na -enwu enwu nke dabara n'ụzọ nke nnukwu ụgbọ elu na -eji efepụ na ịda. Ozugbo mmalite, ihe atụ dị square mita 55 nke ọdụ ụgbọ elu City (n'ọtụtụ 1: 750) na-akpọ ndị ọbịa ka ha banye njem nlegharị anya nke nchọpụta. Enwere ike inyocha ihe atụ zuru oke nke ọdụ ụgbọ elu ahụ niile na ụlọ 400 ya na-adịghị mma site na iji iPad. Ihe karịrị mmasị dijitalụ 80 na -enye ọtụtụ ozi na -atọ ụtọ n'ụdị ederede, vidiyo na ihe nkiri 3D. “Smart windo” na-eji eziokwu mebere iji gbakwụnyere ihe ngosi pronrama na data nọ n'ụgbọ elu kwụsịrị. Enwere ike ịnụ ụtọ akụkọ na -atọ ụtọ banyere zeppelins na Berlin Airlift n'oge ịlaghachi azụ n'oge.
“Globe”, nnukwu mgbidi LED na -emekọrịta ihe nwere ihe nlele 28, na -ahụ anya ụgbọ elu niile na -aga n'ihu n'etiti FRA na isi ihe ndị ọzọ n'ụwa niile ozugbo. Ọ bụ ụzọ na -atọ ụtọ iji nweta nnukwu njikọ nke njikọ ụwa na mgbagwoju anya nke ụgbọ elu mba ụwa.
Njegharị ọdụ ụgbọ elu a ma ama ga -amalitekwa na mbido Ọgọstụ. Njem njem ahụ na -ewe nkeji iri anọ na ise ma gụnye akụkọ ndụ iji nye ọnụ ọgụgụ na -atọ ụtọ, data na eziokwu na ọdụ ụgbọ elu na ọrụ ya. Njem XXL nke nkeji 45 na-enye nleba anya sara mbara n'azụ ihe nkiri. Ndị ọbịa ga -ekiri arụmọrụ njikwa ala, mbuli elu na ọdịda mgbe ha na -agafe nso ụgbọ elu, na -ahụkwa nlele nke nọmba ọkụ ọkụ ọhụrụ 120 na ọrụ ihe owuwu iji wuo Terminal 1 ọhụrụ na ndịda ọdụ ụgbọ elu.
Zọ kachasị mma iji mee njem nlegharị anya n'ọdụ ụgbọ elu bụ ịnụ ụtọ echiche site na Terrace ndị ọbịa a ma ama. Ikpo okwu a na Terminal 2 na-enye nlele anya nnụnụ nke ụgbọ elu si n'akụkụ ụwa niile na-abata ma na-apụ ma na-eme mkpọtụ na ọdụ ụgbọ elu. Iji mee mmemme ịmalitegharị ya, nnabata bụ n'efu maka obere oge - iji bulie ọnụ ọgụgụ ndị ọbịa n'oge ọ bụla, agbanyeghị, ọ dị mkpa idobe oghere oge.
Achọrọ ndoputa maka akụrụngwa niile ma enwere ike ịme ya na ụlọ ahịa tiketi na www.fra-tours.com. O di nwute, enwebeghị ike ime ya na saịtị. N'oge ezumike ụlọ akwụkwọ oge ọkọchị na steeti Hesse nke German, ndị ọbịa nke Ebe Ndị ọbịa nwere ike ịpasa ụgbọ ala n'efu na ebe a na -adọba ụgbọala ọha nke FRA: naanị were tiketi mgbe ị na -anya ụgbọ ala wee mee ka ọ dị mma n'ọnụ ụzọ ụlọ ọbịa. Ọzọkwa maka ndị njem ụbọchị, ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na -abụkarị ebe bara uru - dị ka ọ na -adịkarị mgbe ị na -agbaso iwu dị ugbu a iji gbochie ọrịa.
Ọ dị mkpa ịmara: dị ka Terrace nke ndị ọbịa, enwere ike ịdebe ọtụtụ ụlọ ọrụ Fraport Visitor Center maka ịme mmemme dị iche iche.